Luka Asɛmpa 22:1-71
Asɔfo bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu (1-6)
Twam a etwa to no ho ntotoe (7-13)
Awurade Anwummere Aduan no (14-20)
“Nea obeyi me ama no ne me te ɔpon ho” (21-23)
Asuafo no gyee akyinnye denneennen wɔ nea ɔyɛ wɔn mu ɔkɛse no ho (24-27)
Yesu ne wɔn yɛɛ ahenni bi ho apam (28-30)
Yesu kae sɛ Petro bɛka sɛ onnim no (31-34)
Ehia sɛ wɔboaboa wɔn ho; sekan abien no (35-38)
Yesu kɔbɔɔ mpae wɔ Ngodua Bepɔw so (39-46)
Wɔkyeree Yesu (47-53)
Petro kae sɛ onnim Yesu (54-62)
Wodii Yesu ho agoru (63-65)
Wodii n’asɛm wɔ Sanhedrin no anim (66-71)
22 Afei, na Paanoo a Mmɔkaw* Nnim Afahyɛ, nea wɔfrɛ no Twam+ no rebɛn.+ 2 Ná asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no rehwehwɛ ɔkwampa a wɔbɛfa so akum no,+ efisɛ na wosuro nkurɔfo no.+ 3 Ɛnna Satan wuraa Yuda mu, nea wɔfrɛ no Iskariot a na ɔka Dumien no+ ho no, 4 na ɔkɔɔ asɔfo mpanyin no ne asɔrefi ahwɛfo no hɔ, na ɔne wɔn kɔkaa ɔkwan a ɔbɛfa so ayi no ama wɔn no+ ho asɛm. 5 Wɔn ani gyee ho paa, enti wɔpenee so sɛ wɔbɛma no dwetɛ sika.+ 6 Ɛnna ogye toom, na ofii ase hwehwɛɛ bere a ɛfata a ɔde beyi no ama wɔn, bere a nnipadɔm biara nni hɔ. 7 Na da a edi kan a wodi Paanoo a Mmɔkaw Nnim no dui, ɛda a ɛsɛ sɛ wɔde Twam aboa no bɔ afɔre no.+ 8 Enti Yesu somaa Petro ne Yohane, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na munkosiesie Twam no mma yemmedi.”+ 9 Na wobisaa no sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yekosiesie?” 10 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Sɛ muwura kurow no mu a, ɔbarima bi a ɔso ahina behyia mo. Munni n’akyi nkɔ ofi a ɔbɛkɔ mu no mu.+ 11 Na monka nkyerɛ ofiwura no sɛ, ‘Ɔkyerɛkyerɛfo no se yemmisa wo sɛ: “Ahɔhodan a me ne m’asuafo bedi Twam no wom no, ɛhe na ɛwɔ?”’ 12 Na ɔbarima no bɛkyerɛ mo abansoro dan kɛse bi a wɔasiesie mu. Monyɛ Twam no ho ntotoe wɔ hɔ.” 13 Enti wɔkɔe, na wokohuu nea ɔka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ, na wɔyɛɛ Twam no ho ntotoe. 14 Enti bere soe no, ɔne asomafo no kɔtenaa adidipon ho.+ 15 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mepɛ paa sɛ me ne mo di Twam yi ansa na mahu amane; 16 na mereka akyerɛ mo sɛ, merenni bi bio kosi sɛ ɛbɛba mu wɔ Onyankopɔn Ahenni mu.” 17 Ɛnna ogyee kuruwa no, na ɔdaa ase kae sɛ: “Munnye eyi, na momfa mma mo mu biara mma ɔnnom bi, 18 na mereka akyerɛ mo sɛ, efi nnɛ rekɔ, merennom bobesa bio kosi sɛ Onyankopɔn Ahenni bɛba.” 19 Afei nso, ɔfaa paanoo,+ na ɔdaa ase, na obubuu mu de maa wɔn, na ɔkae sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me nipadua+ a mo nti wɔde bɛma.+ Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae me.”+ 20 Afei ɔyɛɛ kuruwa no saa ara bere a wodii anwummere aduan no wiei no, na ɔkae sɛ: “Kuruwa yi gyina hɔ ma apam foforo+ a ɛnam me mogya+ so, nea wobehwie agu ama mo+ no. 21 “Nanso hwɛ! nea obeyi me ama no ne me te ɔpon ho.*+ 22 Ampa, onipa Ba no rekɔ sɛnea wɔahyɛ ato hɔ no;+ nanso, onipa a wɔnam no so beyi no ama no nnue!”+ 23 Enti wofii ase bisabisae sɛ, wɔn mu hena paa na ɔrebɛyɛ eyi.+ 24 Na akasakasa bi nso sɔree wɔn mu sɛ, wɔn mu hena na ɔyɛ ɔkɛse.*+ 25 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Amanaman no ahemfo di wɔn nkurɔfo so sɛ awuranom, na awuranom a wodi wɔn so tumi no, wɔfrɛ wɔn Adɛɛfo.*+ 26 Na mo de, ɛnsɛ sɛ moyɛ saa.+ Na mmom momma nea ɔyɛ mo mu ɔkɛse no nyɛ sɛ akumaa koraa,+ na nea odi anim no nyɛ ɔsomfo. 27 Hena na ɔyɛ ɔkɛse, nea ɔredidi* anaa nea ɔresom? Ɛnyɛ nea ɔredidi* no? Na me de, mewɔ mo mu sɛ nea ɔresom.+ 28 “Nanso, mo na moda so bata me ho+ wɔ me sɔhwɛ mu;+ 29 na me ne mo reyɛ ahenni ho apam,+ sɛnea m’Agya ne me ayɛ apam no, 30 na moadidi anom me pon so wɔ m’Ahenni mu,+ na moatena nhengua so+ abu Israel mmusuakuw 12 no atɛn.+ 31 “Simon, Simon, hwɛ! Satan pɛ sɛ onya kwan huw mo nyinaa mo so sɛ hwiit.+ 32 Nanso masrɛ ama wo, na wo gyidi ansa.+ Na wo, sɛ wosan ba a, hyɛ wo nuanom den.”+ 33 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, mayɛ krado sɛ me ne wo bɛkɔ afiase ne owu mu mpo.+ 34 Nanso ɔkae sɛ: “Petro, mereka akyerɛ wo sɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn nnɛ no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ 35 Afei obisaa wɔn sɛ: “Bere a mesomaa mo a moamfa sika kotoku ne aduan bɔtɔ ne mpaboa+ no, biribi hiaa mo anaa?” Wɔkae sɛ: “Daabi!” 36 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Seesei de, nea ɔwɔ sika kotoku no, ɔmfa, na nea ɔwɔ aduan bɔtɔ no nso nyɛ saa ara, na nea onni sekan no ntɔn n’ataade nguguso na ɔntɔ bi. 37 Na mereka akyerɛ mo sɛ, ɛsɛ sɛ nea wɔakyerɛw yi ba mu wɔ me so sɛ, ‘Wɔkan no fraa mmaratofo.’+ Na nea wɔakyerɛw wɔ me ho no reba mu.”+ 38 Ɛnna wɔkae sɛ: “Awurade, hwɛ! sekan abien ni.” Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eye.” 39 Bere a opuei no, ɔkɔɔ Ngodua Bepɔw* no so sɛnea ɔtaa yɛ no, na asuafo no nso dii n’akyi.+ 40 Bere a woduu hɔ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommɔ mpae na moankɔ sɔhwɛ mu.”+ 41 Na ɔtwee ne ho fii wɔn ho kɔɔ anim kakra,* na obuu nkotodwe, na ofii ase bɔɔ mpae. 42 Ɔkae sɛ: “Agya, sɛ wopɛ a, yi kuruwa yi fi me so. Nanso, ɛnyɛ nea mepɛ, na mmom nea wopɛ na ɛnyɛ hɔ.”+ 43 Ɛnna ɔbɔfo bi fi soro yii ne ho adi kyerɛɛ no, na ɔhyɛɛ no den.+ 44 Ná ne ho yeraw no paa, enti ɔkɔɔ so bɔɔ mpae denneennen;+ na ne ho fifiri yɛe sɛ mogya a ɛresosɔ gu fam. 45 Na bere a owiee mpaebɔ no, ɔkɔɔ asuafo no nkyɛn kohui sɛ wɔretɔ nko, efisɛ awerɛhow nti na wɔabrɛ.+ 46 Na obisaa wɔn sɛ: “Adɛn na morededa? Monsɔre na monkɔ so mmɔ mpae, na moankɔ sɔhwɛ mu.”+ 47 Bere a ogu so rekasa no, hwɛ! nnipadɔm bi baa hɔ, na na Dumien no mu baako a wɔfrɛ no Yuda di wɔn anim, na ɔbaa Yesu nkyɛn befew n’ano.+ 48 Na Yesu bisaa no sɛ: “Yuda, mfewano na wode reyi onipa Ba no ama?” 49 Bere a wɔn a wɔka ne ho no huu nea ɛrebesi no, wɔkae sɛ: “Awurade, yɛmfa sekan nkɔ wɔn so anaa?” 50 Wɔn mu baako mpo de sekan twaa ɔsɔfo panyin akoa no aso nifa fii hɔ.+ 51 Na Yesu buae sɛ: “Momma ɛnso ha yi ara.” Na ɔde ne nsa kaa n’aso no, na ɔmaa ne ho tɔɔ no. 52 Afei Yesu ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin ne asɔrefi ahwɛfo ne mpanyimfo a wɔaba rebɛfa no no sɛ: “Mode sekan ne nkontimmaa* aba sɛnea moreba ɔkorɔmfo werɛmfo so?+ 53 Bere a na me ne mo wɔ asɔrefi hɔ daa no,+ moankyere me.+ Nanso eyi ne mo bere ne bere a esum di tumi.”+ 54 Afei wɔkyeree no de no kɔe,+ na wɔde no kɔɔ ɔsɔfo panyin no fi, na na Petro di wɔn akyi wɔ akyiri.+ 55 Na wɔsɔɔ ogya tenatenaa ho wɔ adiwo no mfinimfini, na na Petro te wɔn mu bi.+ 56 Ɛnna abaawa bi huu no sɛ ɔte ogya no ho,* na ɔhwɛɛ no dinn kae sɛ: “Ná ɔbarima yi nso ka ne ho.” 57 Nanso wannye antom, na ɔkae sɛ: “Ɔbea, minnim no.” 58 Na bere tiaa bi akyi no, obi foforo huu no kae sɛ: “Wo nso woka wɔn ho.” Na Petro kae sɛ: “Ɔbarima, menka wɔn ho.”+ 59 Na ɛno akyi bɛyɛ dɔnhwerew baako no, ɔbarima foforo nso fii ase kaa no denneennen sɛ: “Ampa, na saa ɔbarima yi nso ka ne ho; nokwasɛm ne sɛ, ɔyɛ Galileani!” 60 Nanso Petro kae sɛ: “Ɔbarima, minnim nea woreka no.” Na ɛhɔ ara, bere a ogu so rekasa no, akokɔ bɔnee. 61 Ɛnna Awurade dan ne ho, na ɔhwɛɛ Petro anim, na Petro kaee asɛm a Awurade ka kyerɛɛ no no sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn nnɛ no, na woaka no mprɛnsa sɛ wunnim me.”*+ 62 Na opue kosui pii. 63 Afei mmarima a wɔkyeree Yesu no fii ase dii ne ho agoru+ bobɔɔ no;+ 64 na wɔde ade kataa n’ani, na wɔkeka kyerɛɛ no sɛ: “Wuse woyɛ odiyifo a, kyerɛ yɛn nea ɔbɔɔ wo!” 65 Na wɔkekaa abususɛm foforo pii tiaa no. 66 Bere a ade kyee no, ɔman no mpanyimfo bagua no, asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no nyinaa hyiae,+ na wɔde no kogyinaa Sanhedrin no asa so, na wɔkae sɛ: 67 “Sɛ wone Kristo no a, ka kyerɛ yɛn.”+ Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ meka kyerɛ mo mpo a, morennye nni da. 68 Na sɛ mibisa mo asɛm nso a, moremma me mmuae. 69 Nanso, efi saa bere yi rekɔ no, onipa Ba+ no bɛtena Onyankopɔn nsa nifa a tumi wom no so.”+ 70 Ɛnna wɔn nyinaa bisaa no sɛ: “Enti, wone Onyankopɔn Ba no?” Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ankasa na moreka sɛ mene no.” 71 Na wɔkae sɛ: “Adanse foforo bɛn bio na yehia? Yɛn ankasa ate afi ɔno ara anom.”+
^ Anaa “nsa bɛn me wɔ pon so.”
^ Anaa “otitiriw.”
^ Anaa “Ayamyefo.”
^ Anaa “ɔte adidipon ho.”
^ Anaa “woapa me mprɛnsa.”
^ Anaa “baabi a wotow ɔbo a, ɛbɛkɔ akɔtɔ.”
^ Anaa “mporibaa.”
^ Anaa “sɛ ɔte ogya no hann mu.”